६ वर्षीय नयाँ मेस्सी ! – Khabarhouse
६ वर्षीय नयाँ मेस्सी !
Khabar house | २ बैशाख २०७७, मंगलवार १०:५३ | Comments
एजेन्सी : महामारीका कारण विश्वभर फुटबल गतिविधि ठप्प हुँदा इरानका ६ बर्षीय आरत होसेइनीले भने फुटबल कै कारण चर्चा बटुलेका छन् । बार्सिलोनाका कप्तान लियोनल मेस्सीका असली फ्यान आरत अहिले सामाजिक सञ्जालमा भाइ रल भएका छन् । बार्सिलोनाको जर्सी लगाएर आरतले हानेको ओभरडेड किकसँगै उनको ‘सिक्स प्याक’ शरीर र लामो कर्ली कपालले विश्वभर चर्चा बटुलेको हो ।
अहिले होम क्वारेन्टाईनमा बसेका आरतले फुटबल किक हानेको भिडियो सामाजिक सञ्जालमा भा’ईरल भएको छ । धेरैले उनलाई नयाँ मेस्सीको नाम दिएका छन् । आरत आफै मेस्सीका फ्यान हुन् । आरतको किक सहितको उक्त भिडियोलाई बार्सिलोनाले आफ्नो अफिसियल ट्वीटरमा समेत पोस्ट गरेको छ । बार्सिलोनाले ‘किड इज योङ गोट’ भनेको छ ।
उक्त भिडियोलाई विश्व फुटबल महासंघ (फिफा) ले पनि रिट्वीट गरेको छ । भिडियो भाईरल भएपछि मेस्सीले पनि आरतको इन्स्टाग्राममा कमेन्ट गरेका छन् । आरतले मेस्सीको कमेन्टलाई धन्यबाद दिँदै भविष्यमा आफ्नो चाहना बार्सिलोनाबाट खेल्नु रहेको बताएका छन् । इरानको उत्तरी क्षेत्रमा जन्मिएका आरत अहिले इङ्लिस प्रिमियर लिग क्लब लिभरपुलको जुनियर एकेडेमीमा फुटबल सिकिरहेका छन् । तर पनि आरत हरेक रात बार्सिलोनाबाट खेलेको सपना देख्छन् रे । सामाजिक सञ्जाल इन्स्टाग्राममा अहिले उनको फलो अर्स तीन मिलियन पुगिसकेको छ ।